'Apple Support' dia manamora ny fahitana ny fiantohana sy ny fandrakofana ny vokatra | Vaovao IPhone
'Apple Support' dia manamora ny fijerena ny fiantohana sy ny fandrakofana ny vokatra
Angel Gonzalez | 07/04/2021 20:00 | About us, Apple products
Mividy vaovao fitaovana amin'ny ampahan'ny mpampiasa dia tsy maintsy manana andian-toetra fototra izy mba ho tony hatrany ny mpanjifa. Voalohany indrindra, fampahalalana momba ny kalitao momba ilay fitaovana novidinao. Faharoa, ny mangarahara momba ny fomba fandefasana, ny faharetan'ny tombana ary ny daty fandefasana eo ho eo. Ary farany, fampirantiana ny ny fandrakofana sy fiantohana atolotry ny orinasa. Apple dia manome antoka maharitra herintaona amin'ny fitaovany rehetra misy ny fividianana fiantohana fanampiny, AppleCare. Miaraka amin'ny fanavaozana ny app vaovao 'Apple Support' Azontsika atao ny manamarina ny fiantohana ny fitaovantsika sy ny fandrakofana raha toa ka manana AppleCare izahay.
Zahao ny fandrakofana ny fitaovanao avy amin'ny 'Apple Support'
Mila vonjy? Raiso ny fanampiana ara-teknika ilainao amin'ny vokatra Apple tianao indrindra - avy amin'ny toerana iray izy rehetra. Apple Support dia manome anao fidirana manokana amin'ny vahaolana ho an'ny vokatra sy serivisinao Apple. Ianaro ny fomba hitantanana ny famandrihanao na hamerenanao ny teny miafinao Apple ID, ankoatry ny zavatra hafa.
Nanapa-kevitra i Apple mandefa fampiharana izay hampiroboroboana ny fanohanana sy ny serivisy teknika tsy mila adala amin'ny tranokalanao. Izy io dia Apple Support, fampiharana tsotra, marobe ary feno azo alaina ho an'ny iOS sy iPadOS. Rehefa nandeha ny taona dia nanjary vitamina ity fampiharana ity miaraka amin'ny vaovao maro kokoa ary nanjary toerana iray ilazana fangatahana fanampiana avy amin'ny fanohanana ara-teknika ary mangataka fotoana voatondro mihitsy aza mba handeha any amin'ny Apple Store.
Ity no fomba ahafahanao mifandray amin'ny fanohanan'ny Apple
vaovao 4.2 version manolotra lafin-javatra telo vaovao manatsara ny fampiasana ary manome fiasa vaovao ho an'ireo mpampiasa. Voalohany, tafiditra ao ny safidy fampahatsiahivana famandrihana amin'ny alàlan'ny antso an-tariby na fandefasana hafatra an-tsoratra. Ampidirina ao amin'ny Apple Store ara-batana izay ampandrenesin'izy ireo anao rehefa afaka ny Genius ary afaka mandeha any amin'ny fivarotana ianao. Na izany aza, amin'ity kinova vaovao ity rehefa manao ny famandrihana azonao atao ny mametraka ny fampahatsiahivana ho azy.
Nampidirina koa izy io fitaovana iray hanamarinana ny fandrakofana sy ny fiantohana ny vokatra vokarinay. Raha manana AppleCare isika dia afaka mahita ireo lafiny samihafa izay norakofantsika sy ny fomba hidirana amin'ny fanohanana ilainay. Ho fanampin'izany, a App Clip hijerena mora foana ny fiantohana fampidirana ny nomeraon-tena na amin'ny fisafidianana ny fitaovana an'ny Apple ID.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » 'Apple Support' dia manamora ny fijerena ny fiantohana sy ny fandrakofana ny vokatra
Ny tamba-jotra Apple's Find dia mifanaraka amin'ny kojakoja fahatelo
Manidy an-tsitrapo ny Apple Stores rehetra any Frantsa i Apple